Tatoazy reny sy zanaka tany am-boalohany, hevitra maro | Ny fanaovana tatoazy
Tatoazy reny sy zanaka tany am-boalohany, hevitra maro
Antonio Fdez | | Tatoazy misy endrika, Tattoos misy litera
Ny iray amin'ireo antony lehibe manosika ny olona haka tatoazy amin'ny vatany dia ny fitiavana arahin'izy ireo ho an'ny mpianakavy na namana iray. Ohatra iray mazava ny tatoazy reny sy zanakavavy original.
Ao amin'ity lahatsoratra ity hiresaka lalina momba an'io karazana tombokavatsa, tsy isalasalana fa iray amin'ireo antony tsara indrindra tokony hampidirana ranomainty amin'ny hoditsika.
1 Ny antony fanaovana tatoazy ho fanajana ny ray aman-drenintsika
2 Hevitra tatoazy ho an'ny reny sy zanaka vavy
2.1 Andianteny antsasany, idealy ary malaza be
2.2 Vonona tsy vita feno ny famolavolana feno
2.3 Flamingo roa, mariky ny fifandanjana
2.4 Voninkazo mifanentana, endrika kanto
2.5 Masoandro sy volana ho an'ny mistika indrindra
2.6 Vorona manidina amin'ny fahalalahana
2.7 Fijerena, satria tsy mandalo anao ny fotoana
2.8 Sary izay tsy mety maty mandrakizay anao
2.9 Tatoazy tsy mahaliana, andiany iray amin'ny andalana iray
2.10 Tatoazy biby izay maneho anao
2.11 Zana-tsipika, mandrosoa foana
2.12 Tattoos Origami, ny kanto taratasy amin'ny hoditrao
3 Sarin'ny Tatoazy ho an'ny Reny sy ny Zanakavavy
Ny antony fanaovana tatoazy ho fanajana ny ray aman-drenintsika
Mahazatra ny mahazatra indrindra dia ny mihaona amin'ireo reny na ray tanora izay manapa-kevitra hanome voninahitra ny zanany vavy na ny zanany lahy amin'ny tatoazy. Ohatra, ny anaran'ny zazalahy na zazavavy, ny daty nahaterahany na ny sary iray aza izay mampatsiahy azy ireo azy dia tena mahazatra.
Na izany aza, tato anatin'ny taona vitsivitsy, dia nanjary lamaody bebe kokoa noho izy ny reny sy ny zanaka vavy dia miara-mandeha amin'ny studio fanaovana tombokavatsa mba hanao tatoazy iraisana. Ho setrin'izany, ireo tombokavatsa ireo dia tsy vitan'ny fanajana ny zanakalahy amin'ny anarana sy daty fotsiny, fa koa mitady fikatsahana manokana izay mampiseho ny maha-akaiky sy reny sy zanaka vavy azy ireo.
Hevitra tatoazy ho an'ny reny sy zanaka vavy
Tena tsara daholo izany, fa, Inona no karazana tatoazy ho an'ny reny sy ny zanakavavy mety ho hitantsika? Eny, ny tena marina dia samy hafa be ny safidiny ary, toy ny karazana tatoazy hafa ihany, ny hany fetrany dia ny fisainantsika (sy ny kalitaon'ny mpanakanto tatoazy izay hahatonga antsika ho tatoazy).
Andianteny antsasany, idealy ary malaza be
Ny iray amin'ireo endrika mahazatra indrindra amin'ity karazana tatoazy ity dia ny fahitana fehezanteny mizara roa mba hahafahana mameno azy io raha miaraka ny reny sy ny zanany vavy. Mitadiava andian-teny izay mifampahatsiahy anao, ohatra, avy amin'ny hira, avy amin'ny tononkalo ...
Vonona tsy vita feno ny famolavolana feno
Safidy iray hafa mahaliana ihany koa ny misafidy endrika tsy feno, mizara roa na vita rehefa miaraka ny olona roa. Ity dia fomba iray hahatsiarovantsika ny fitiavantsika ny renintsika na ny zanatsika vavy ary ny fananana izany olona manokana izany foana ao amin'ny fitadidiantsika. Ary tena tsara tarehy ireo tombokavatsa ireo satria mampiseho fitiavana ny reny.
Flamingo roa, mariky ny fifandanjana
Flamingos dia biby tsara tarehy, miaraka amin'ny tonony mavokely dia toa tsara izy ireo, ary ny tandindonin'izy ireo dia tena mety amin'ny tatoazy iraisana eo amin'ny reny sy ny zanany vavy. Flamenco dia tandindon'ny fampiononana mety ho hitantsika amin'ny fiarahan'ny hafa, ary koa ny fanohanana sy ny fifandanjana. Mitadiava endrika izay tianareo roa, azonao atao ny misafidy flamenco hazo maina ary na biby tsy mitovy habe aminy aza mba hazava tsara hoe iza no zokiny indrindra.
Voninkazo mifanentana, endrika kanto
Singa iray hafa izay afaka manome lalao bebe kokoa ny voninkazo. Azonao atao ny misafidy endrika amam-boninkazo misy dikany mifandraika amin'ny toetranao na koa amin'ny anaranao (Rosa, Jacinta, Narcisa ...). Raha te hanamboatra azy io hatrany am-boalohany ianao dia safidio ny tatoazy izay tsy vita raha tsy eo ianareo roa, ohatra, miaraka amin'ny fehiloha voninkazo amin'ny tanany.
Masoandro sy volana ho an'ny mistika indrindra
Anisan'ireo singa mifameno, ny iray izay miasa tanteraka eo anelanelan'ny reny sy ny zanaka vavy dia ny volana sy ny masoandro. Izy ireo dia lafiny roa amin'ny vola iray ihany, satria ny iray mitarika ny tontolo andro raha ny iray kosa miambina amin'ny alina, ary amin'ny tatoazy dia miasa tsara izy ireo, na amin'ny endrika tsotra na amin'ny hafa izay manana esoterika kokoa.
Vorona manidina amin'ny fahalalahana
Lohahevitra mahafinaritra ho an'ireo reny sy zanakavavy izay maniry tatoazy reny sy zanaka tany am-boalohany hanambarana fa tonga ny fotoana tokony avelantsika hisidina ny zanakay vavy ... fa tsarovy foana izahay. Mandehana amina endrika tsy feno, izay misy ny tranom-borona misokatra ary ny iray hafa dia andiam-borona.
Fijerena, satria tsy mandalo anao ny fotoana
Ny fotoana dia iray amin'ireo mpihetsiketsika lehibe an'ny tatoazy, noho izany dia tsy fahita firy izy na dia kintana amin'ny famolavolana eo amin'ny reny sy ny zanakavavy aza. Ny fotoana, rehefa dinihina tokoa, no hany zavatra maha-izy antsika sy izay omen-drenintsika antsika rehefa teraka: fotoana iray ialana amin'ny fiainana sy fiainana.
Sary izay tsy mety maty mandrakizay anao
Hevitra tena milay, izay efa hitanao tamin'ny lahatsoratra hafa, dia ny misafidy endrika izay mampiseho anao amin'ny fomba hafa sy mahafinaritra indrindra: makà sary rehefa mbola kely ianao ary manaova tatoazy. Ny mahazatra indrindra dia ny misafidy ny sarin-janakavavy, na dia sary mahafinaritra aza ny sary an-tsaina ny reniny momba ny fianakaviany fony izy mbola kely dia mahafinaritra ihany koa.
Tatoazy tsy mahaliana, andiany iray amin'ny andalana iray
Efa niresaka momba ireo tatoazy mahaliana ireo isika, izay amoronana tsipika manokana ho an'ireo traikefa manan-danja indrindra amin'ny fiainan'ny olona. Araka ny azonao an-tsaina, Hevitra mahafinaritra indrindra amin'ny tranga misy tombokavatsa reny sy zanaka vavy, izay azo atambatra tsara.
Tatoazy biby izay maneho anao
Talohan'ny niresahantsika momba ny flamingo, saingy misy biby maro hafa afaka mijery tsara amin'ny tatoazy. Na te hampiseho ny lafiny madrassa an'ny iray ianao (miaraka amin'ny liom-bavy sy ny zanak'osy, ohatra), ny hafanam-pon'ny roa (tigra) na ny fitiavanao ny sahona fotsiny, Ny tatoazy biby dia safidy iray miaraka amin'ny fahafaha-manao an'arivony maro.
Zana-tsipika, mandrosoa foana
Raha, etsy ankilany, ianao dia mila famolavolana izay tena, tena tsotra, dia afaka misafidy ny zana-tsipìka. Ireo dia mety ho lava na fohy, na manana tandindona mifangaro (toy ny infinity), fa na izany na tsy izany dia misy dikany hatrany mitovy amin'izany: mila mandroso foana ianao, mbola tsara kokoa aza raha miaraka manao!
Tattoos Origami, ny kanto taratasy amin'ny hoditrao
Farany, Ny tatoazy Origami dia azo zahana ihany koa, indrindra raha maniry ny hisafidy dikany iray ianao izay mampiseho fa na dia olona tsy mitovy aza ianao dia mitovy ny fotony (mba hahafahanao misafidy sambo sy fiaramanidina taratasy, ohatra) na fahatsiarovana ankizy kely.
Sarin'ny Tatoazy ho an'ny Reny sy ny Zanakavavy
Araka ny efa nolazainay, ny safidy mety indrindra dia ny misafidy ny tatoazy izay tsy feno raha tsy miaraka amin'ny reninao na zanakavavinao ianao. Angamba azonao atao ny mahita ny aingam-panahinao amin'ireto galeria tatoazy manaraka ireto miaraka amina endrika bebe kokoa ho an'ny reny sy ny zanakavavy ary afaka mahazo tatoazy miaraka amin'ny reninao na zanakao vavy ihany ianao amin'ny farany. Na ahoana na ahoana, dingana iray izay horaisinareo roa, ary izany dia hampiorina bebe kokoa ny fifandraisanareo. Azo antoka fa tsy hanenenanao izany.
Ny tatoazy reny sy zanaka tany am-boalohany dia tena tsara tarehy ary fomba mahafinaritra tokoa hanehoana ny maha akaiky anao, marina? Lazao anay raha manana ianao, raha tianao ny endrika manokana na ny hevitra anananao ho an'ny volavolanao, mila mamela hevitra fotsiny ianao!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Ny fanaovana tatoazy » Karazana tombokavatsa » Tatoazy misy endrika » Tatoazy reny sy zanaka tany am-boalohany, hevitra maro
Tatoazy virjiny, toetra amam-pinoana mahatoky maro
Tatoazy misy ny anaran'ny ankizy, miaraka aminao mandrakizay